Xog: FARMAAJO oo 3 arrin mid ka dalbaday Qoor Qoor, Lafta-gareen iyo Guudlaawe - Caasimada Online
Home Warar Xog: FARMAAJO oo 3 arrin mid ka dalbaday Qoor Qoor, Lafta-gareen iyo...
Xog: FARMAAJO oo 3 arrin mid ka dalbaday Qoor Qoor, Lafta-gareen iyo Guudlaawe
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu warramayaa inuu saddex qodob oo ku saabsan doorashada 2021 hordhigay madaxda saddex maamul goboleed ee taageersan.
Xogta laga helayo Villa Somalia ayaa sheegeysa inuu Madaxweyne Farmaajo ku tirtirsiiyey madaxweynayaasha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasann Maxamed Lafta-gareen iyo HirShabelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan doorashada Aqalka Sare ama ay xal ka keenaan dhinacyada tabashada ka qaba.
2- In madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland, Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam Madoobe laga keeno heshiis cusub oo muddo kooban dib loogu dhigo doorashada inta xal laga gaarayo.
3- Inay doorashada senatoorada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ka bilaabato maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug, HirShabeelle iyo Gobolka Banaadir, haddii labada qodob ee hore ay ku guul-darreystaan.
Qaar ka mida wakiilada beesha caalamka iyo siyaasyiinta ayaa madaxweyne Farmaajo ku tilmaamay inuu shaqadii laga sugayey isaga inuu u xil saaray madaxda saddexda maamul goboleed ee taageersan.